Mihahenjana ny adim-pahefana ao Venezoelà, voasakana ny aterineto sy voasivana ny fampitam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2019 9:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Français, Italiano, Ελληνικά, English
Satria mbola mitohy ny fanjavozavoana manoloana ny toe-draharaha politika any Venezoelà, ireo vondrona mpiaro zon'olombelona ao an-toerana sy iraisam-pirenena dia nitatitra ny fanakanana miverimberina amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy samihafa – anisan'izany ny Twitter sy ny Instagram – sy ny trangan-tsivana amin'ny fampitam-baovao.
Nilaza ny tatitra fa nanomboka ny 21 Janoary ny fanakanana ary nihamafy nanomboka ny 23 Janoary 2019 izany, rehefa nampahatsiahy ny andininy amin'ny lalàm-panorenana tamin'ny taona 1999 ao amin'ny firenena mba hanala ny filoha Nicolás Maduro eo amin'ny fahefana, izay nitondra nanomboka tamin'ny taona 2013 i Juan Guaidó, filohan'ny Antenimieram-pirenena ao Venezoelà. Nihanitombo tsy nisy tahaka izany ny fihetsiketsehana manohitra an'i Maduro tao an-drenivohitra, Caracas, ary tany amin'ny faritra maro hafa ao amin'ny firenena ihany koa.
Sarotra ny toe-draharaha lalovan'ny Venezoeliana ankehitriny satria naneho ny fanohanany an'i Guaidó ho filohan'i Venezoela vonjimaika ny ankamaroan'ny vondrom-piarahamonina Amerikana Latina sy ireo mpiantsehatra iraisampirenena goavana maro- anisan'izany i Etazonia . Ireo firenena isam-paritra izay tsy miombon-kevitra amin'izany kosa dia i Meksika, Orogoay, Bolivia ary Kiobà. Raha i Shina sy Rosia kosa no naneho ny fanohanany an'i Maduro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Mandritra izany fotoana izany, lasa miha-mahery vaika isan'andro ny fanaraha-maso ny vaovao sy ny fifandraisana, fepetra izay niha-natanjaka tao anatin'ny taona vitsy lasa. Araka ny voalazan'i Guaidó, dia voatery hanafoana ny antsafa maromaro tamin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo izy, satria nandrara ny fampahalalam-baovao tsy hanonona ny anarany ny Vaomieram-pirenena momba ny Fifandraisan-davitra (Conatel).
Nanangona tatitra sy nanao andrana ny fikambanana eo an-toerana Internet Sin Filtro ary nizara vaovao momba ny fomba hialana amin'ireo sakana ihany koa. Nitatitra momba ny sakana miverimberina amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy samihafa- toy ny Instagram sy Twitter – izy ireo nanomboka ny 21 Janoary, tany amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena.
Nizara ny fanadihadihana mikasika ny fomba hanarahan'ny paikady teknika toy izany ny vaovao sy ny fifandraisana amin'ny Aterineto amin'ny fitaovana miha-sarotra ampiasaina kokoa i Carlos Guerra avy ao amin'ny Derechos Digitales. Araka ny voalazan'i Guerra, tsy ny paikadin'ny fanakanana ihany no be pitsony sy sarotra ampiasaina fa sarotra resena ihany koa izany.
Zava-dehibe ny manamafy fa tsy nitranga fotsiny teo anivon'ny krizy politika ihany ireo fanakanana ireo fa tao anatin'ny ahiahy manahirana lehibe momba ny volavolan-dalànan'ny fiarovana an-tserasera ihany koa, izay, araka ny tatitra nataon'ny Access Now dia “nametraka ny zo nomerika ao Venezoela – ary ny aterineto iray manontolo ao amin'ny firenena – ho tandindonin-doza “.
Nanameloka ny mety ho fiantraikan'ity volavolan-dalàna ity ny fikambanana hafa miaro ny zo nomerika, toa ny Derechos Digitales Amérika Latina, ary nanambatra ny lisitr'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka tao anatin'ny fanambarana manohitra izany:
Nanamarika ny tatitra avy amin'ny sehatra fampahalalam-baovao an-tserasera tsy miankina fa notapahana ny onjam-peo manerana ny firenena sy ny fantsom-baovao Shiliana “Noticias 24 horas” (vaovao 24 ora) ary nomena fampitandremana mba tsy hanao tatitra momba ny fihetsiketsehana na hilaza an'i Juan Guaidó ho filoha vonjimaika.
Nandritra izany fotoana izany, nangatahana mba “hamerina hijery” ny fandaharany ary hanala ireo fandaharana sasantsasany ny vondrom-piarahamonin'ny onjam-peo Fe y Alegría, toy ny iray tontosain'ny fikambanana mpiaro zon'olombelona Provea. Nizara ny vaovao tao amin'ny Twitter i Rafael Uzcátegui, talen'ny Provea :
Raha mbola nitohy ny hetsi-panoherana ary nikabary i Guaidó dia mbola nanohy ny fandaharany mahazatra ny ankamaroan'ireo zoro fampitam-baovao, araka ny notaterin'i Efecto Cocuyo:
Nitranga tao anatin'ny tontolon'ny fampitam-baovao izay efa voafetra ireo fanakanana sy ny fanaraha-maso ny fampahalalam-baovao ireo ka nanery ireo Venezoeliana hiankina amin'ny aterineto sy ny sehatra fampahalalam-baovao tsy miankina mba hahazoana vaovao lehibe. Raha nisafidy izay ho tohanany ny vondrom-parahamonina iraisam-pirenena ary niha-henjana ny fifandirana dia azo inoana fa hitombo bebe kokoa ny fanaraha-maso amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy an-tserasera
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny fivoaran'ity toe-draharaha ity dia vakio ny pejin'ny fitantaranay manokana: Inona no mitranga ao Venezoela .